N’anga yobatsira vechidiki kuMbare | Kwayedza
17 Oct, 2021 - 09:10 2021-10-15T17:41:41+00:00 2021-10-17T09:32:38+00:00 0 Views
Mbuya Sarudzai Jaravaza vaine vamwe vechidiki vavari kubatsira mubasa rekuhodha zvirimwa vachitengesa - Kingstone Mapupu
CHIREMBA wechivanhu wemumusha weMbare, muguta reHarare, ari kusimudzira vechidiki kuburikidza nemabhindauko anosanganisira kuhodha nekutengesa zvirimwa nechinangwa chekuti vakwanise kurarama.
Mbuya Sarudzai Jaravaza (55), avo vanozivikanwa nekunzi Mbuya Sinyoro, vanoti vakavamba mabasa ekusimudzira vechidiki nedonzvo rekuti vabatsirike panguva ino apo mhuri dzakawanda dziri kuomerwa neupenyu zvichitevera kuuya kwechirwere cheCovid-19.
“Kubva mugore ra2020 pakatanga denda reCovid-19 muno kusvika izvozvi, vechidiki vakawanda upenyu hwavo hwadzoserwa kumashure nechirwere ichochi. Muno muMbare, ndakazotanga chirongwa chekutora zvirimwa ndichiisa mumabutiro ndichinotengesa kuzvitoro apo ndakapinza vechidiki mabasa vanondibatsira,” vanodaro.
Mbuya Jaravaza, avo vanova mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vanachiremba vechivanhu reZimbabwe National Practitioner Association (ZINPA), vanoti zvakakosha kusimudzira raramo yevechidiki sezvo vari ivo vatungamiriri vemangwana.
“Ndinotenga zvirimwa zvinosanganisira magaka, macarrots, mbambaira, derere, macabbages nehanyanisi ndozviisa mumabutiro nekuzviendesa kune vezvitoro zvikuru kwazvinotengeswa zvine hutsanana. Mukuita basa iri, ndine vashandi vechidiki vanodarika gumi,” vanodaro Mbuya Jaravaza.
Vanoti vari kushandawo nevarimi vechidiki kubva kunzvimbo dzakasiyana dzenyika avo vavanotengera zvirimwa zvavo.
“Ndine varimi vechidiki vanobva kunzvimbo dzakaita seMutoko, Murehwa, Chihota, Mhondoro, Norton, nenharaunda dzakapoteredza Harare vandinotengera zvirimwa zvavo tozviisa mumabutiro tozozvitengesa kuzvitoro zvikuru,” vanodaro Mbuya Jaravaza.
Vanoti vane chikwata zvakare chavanagwenyambira vechidiki vanosvika 13.
“Vechidiki vari muchikwata changu cheDuramazwi Mbira Group vanowanawo kurarama nemari inobva mubasa iri uye vamwe vacho vanoenda kuchikoro nekumakoreji akasiyana. Izvozvi takashevedzwa kunoridza kuDubai Expo kwatichange tichinotaridza hunyanzvi nekukosha kwembira munyika muno,” vanodaro Mbuya Jaravaza.
Kunze kwaizvozvo, vanoti vari kudzidzisawo vechidiki tsika nehunhu hwakanaka.
“Ndave kutora nzvimbo yehutete sezvo vanasekuru nemadzitete vazhinji mazuva ano vasisatore nzvimbo dzavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Tinoda kudzosera hunhu hunoyemurika mukurarama kwedu sevanhu vatema,” vanodaro.